सामान्य अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, ३ अर्ब ७८ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
मंसिर ९, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले घटेको छ ।
नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव २२ अंकले घटेर २ हजार ७३१ दशमलव ७८ विन्दुमा कायम भएको छ । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २३३ ओटा धितोपत्रको ७४ लाख ८६ हजार ५७५ कित्ताको ४७ हजार ११३ पटकमा रू.३ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ९ हजार ३३१ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
कारोबारमा आएका २३३ ओटा धितोपत्र मध्ये सबैभन्दा बढी समृद्धि फाइनान्सको धितोपत्रको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५६८ दशमलव २० पुगेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा सामलिङ्ग पावर कम्पनीको शेयरमूल्य कारोबारको पहिलो दिनमै ८ दशमलव १७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३२० दशमलव ५० पुगेको छ ।
बिहीवार सबैभन्दा बढी मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव ९३ प्रतिशत घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८६० दशमलव ५० मा झरेको हो ।
त्यसैगरी दोस्रोमा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत घटेर रू. १ हजार ७३७ मा झरेको छ । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीद विक्री नेपाल दूरसचार कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. २६ करोड ५७ लाख १३ हजार ७३६ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । दोस्रोमा महालक्ष्मी विकास बैंकको रू. १६ करोड २१ लाख ८४ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा परिसूचक मध्ये तीन समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको हो । समूहगत परिसूचक बढ्नेमा बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत र अन्य समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, समूहगत परिसूचक घट्नेमा सबैभन्दा बढी होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक १ दशमलव ४४ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंक समूहको १ दशमलव ३४ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको १ दशमलव २८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत घटेको छ ।